ဗင်းနစ်စ်ကမ်းခြေ ဒရမ်စက်ဝိုင်း.. (Venice Beach Drum Circle) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Local Guides » ဗင်းနစ်စ်ကမ်းခြေ ဒရမ်စက်ဝိုင်း.. (Venice Beach Drum Circle)
ဗင်းနစ်စ်ကမ်းခြေ ဒရမ်စက်ဝိုင်း.. (Venice Beach Drum Circle)
Posted by kai on May 31, 2012 in Local Guides, Music | 27 comments
ပြီးခဲ့တဲ့.. တပါတ်က.. ယူအက်စ်မှာ မီမိုရီရယ်နေ့မို့.. ရုံး၃ရက်ပိတ်တာ.. ဗင်းနစ်စ်ကမ်းခြေဖက်အလယ်သွားပါတယ်..။
အဲဒီမှာ.. ပွဲဈေးတန်းရှိတယ်.။ အနုပညာပစ္စည်းရောင်းကြတယ်..။ ဆေးခြောက်ရောင်းတယ်.။ အမှတ်တရပစ္စည်းတွေရောင်းပါတယ်..။ ပွဲဈေးတန်းက.. သဲသောင်နဲ့ လူနေအိမ်..စားသောက်ဆိုင်တွေကြား.. ကွန်ခရစ်လမ်းလုပ်ထားတာပါ..။
ကပ်ရက်မှာ.. စက်ဘီးစီးဖို့.. လမ်းကြောင်းတခုလည်း ထားပါတယ်..
ကမ်းခြေသဲသောင်ပြင်ကျယ်မှာတော့. ဟိုတခါက..ရွာထဲပြောဖူးတဲ့.. graffitiလုပ်ဖို့..ရေးဖို့..အုပ်နံရံတွေ..ထားပေးတယ်..။
အဲဒီမှာ.. ဆွဲချင်တဲ့သူတွေ.. မှတ်ပုံတင်စာရင်းပေးပြီးဆွဲကြတာပေါ့..
ပြောချင်တာက.. ဗင်းနစ်စ်ကမ်းခြေ ဒရမ်စက်ဝိုင်း.. (Venice Beach Drum Circle)အကြောင်း..
အဲဒီမှာ..လွန်ထဲ့တဲ့..၁၀နှစ်ကျော်ကတည်းက..သတိထားမိပြီး.. ရောက်တိုင်းသွားသွားကြည့်ဖြစ်တဲ့.. ဒရမ်စက်ဝိုင်းအကြောင်းပြောပြချင်တာပါ..
တွေ့ရတာကတော့.. တယောက်ယောက်က.. ဗုံလေး..ဒရမ်လေးတလုံးယူ.. ဘိတခုနဲ့..စပြီးဒုံဒုံလုပ်ရင်..နောက်က.. ရှိတဲ့သူတွေက.. မည်သူမဆို..ခွက်တွေ..တုတ်တွေနဲ့..စည်းချက်ညီတီးမှုတ်ကခုန်ကြတာပါ..။
စည်းချက်ကို.. အသံအကျယ်ဆုံးတီးထားနိုင်တဲ့.. ဒရမ်သမား..ဗုံသမားက..ဦးဆောင်သွားတယ်လို့ထင်ရတာပါပဲ..။
နာရီပေါင်းများစွာ..မရပ်မနား. ရထားလို.. ထွက်ချင်သူထွက်..၀င်ချင်သူဝင်နဲ့.. တီးကြ..ကခုန်ကြတာလေ..။
မြန်မာပြည်မှာလုပ်ရင်.. ပျော်တတ်တဲ့မြန်မာတွေ.. ပိုလို့..ပျော်စရာဖြစ်မယ်တောင်ထင်မိတယ်..။
ဘယ်မှာလဲဗျ ပုံတွေ ဘီဒီယိုဒွေ
ကျုပ်ကဒေါ့ ပျင်းရင် ဒူးနှံ့ ပြီး နေဘလိုက်ဒါဘာဘဲ..
ဗျို့…သဂျီး… ယူအက်စ် မှာ ဆေးခြောက်က တရားဝင်ရောင်းတာပေါ့နော်… ရေခဲတို့… coke တို့ရောဟင်..
ပြည်နယ်တိုင်းတော့မဟုတ်…. တချို့ပြည်နယ်တွေက.. လုံးဝခွင့်မပြုဘူး..
ပုံ (၄)က ဆိုင်က ဘာဆိုင်တုန်းဟင် သူကြီးခိုင်ရေ။
အဲဒီကျောပေးထားတဲ့.. ဘိုမက.. ကမ်းနားကသဲတွေနဲ့..ရေသူမပုံလုပ်.. သူ့သဲအရုပ်နဲ့.. ဓါတ်ပုံတွဲရိုက်ချင်သူဆီက.. ငွေတောင်းတယ်..
မိုက်တယ်ဗျာ။ရဲမေစီးတဲ့ ဟာကလည်းမိုက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီလောက်လူအများကြီး ဒမ်တွေ ၀ိုင်းတီးနေတာ နားများညီးမလားမသိဘူး။ ဘာဖြစ်ဖြစ် မရောက်ဖူးတော့ ရောက်ဖူးချင်ပ..။
သဂျီး ခေးမလေးတွေ ရဲ့ လှတပတ ပုံလေးတွေရော မရိုက်ခဲ့ဘူးလား
သဂျီးလဲ မိန်းမကြောက် ဆိုတော့ ဓါတ်ပုံရိုက်ဘို့ နေနေသာသာ ရဲရဲတောင် ကြည့်ရဲပါ့မလား
လွန်ခဲ့တဲ့..၁၅နှစ်လောက်.. အဓိကရုန်းအကြီးအကျယ်ဖြစ်ဖူးလို့.. ရဲအရမ်းများတာ..
ဟောသည်မှာ သဂျီး ဈေးသည်တွေ တပြွတ်ကြီး ရိုက်ထားတယ်..
သူကြီး က ၀င်ပြိုင်ရင် နိုင်မှာစိုးလို့
ဈေးသည် ပုံ ကို အဖြစ်ပုံလေး တင်လိုက်တာပါ
တကယ့် အလန်းတွေ ထုတ်ပြတာ
ဈေးသည် ၆ က ပေါက်ဖော်နဲ့တောင် တူသေး
ဈေးသည်ပုံက.. ဒစ်စနေလန်းဒ်မှာကို.. ပုံ၎-၅ဆယ်လောက်ရှိ်မယ်ထင်တယ်…
ရိုက်တာတွေက.. သတင်းယူသလို..အချက်အလက်ရှာရှာ ရိုက်မိနေလို့…
အဲ့ဒီလောက် လူစုံတာတောင် အမှိုက် က ဘာကြောင့်များ ပွမနေတာလဲ မသိ
ဒါနဲ့ သူတို့ ဆီမှာလည်း ဆာလာအိတ်သုံးတယ်နော် ပုံ ၆ က ခြင်းထဲမှာ။ :D
နွေဝင်ပြီမို့.. ကားရပ်ခ..ပုံမှန် ၈ဒေါ်လာကနေ.. အဲဒီနေ့က.. ၁၅ဒေါ်လာပေးရတယ်လေ..
အဲဒါ.. ဘိခ်ျရဲ့..ရဲဖိုး. အမှိုက်သိမ်းဖိုးဖြစ်သွားမယ်ထင်တယ်..။
ကမ်းနားသွားထိုင်တုံး.. ကလိရင်း..သဲတွေဝင်ကုန်လို့.. အခြေအနေတောင်..ကောင်းသေးရဲ့လားမသိ… :?
နေပြည်တော် ရေပန်းဥယျာဉ်မှာ ညနေ ၄ နာရီနောက်ပိုင်း ပုံမှန် ၂၀၀ ကနေ ၅၀၀ တိုးကောက်လို့ တင်းနေတာ
ဒဂျီးတို့ဆီမှာလည်း ဒို့လိုပဲဟ.. :?
အော်..ယူအက်စ်မှာ လူဂျီး(မ)တွေလဲ ဆပ်ပြာပူပေါင်းဆော့
တချို့ပုံလေးတွေ ပုံပါ အကြောင်းအရာထက်
ထိုးနေသူ တို့ …။
အဲဒါ ဆို နှိပ်နေသူ ဆိုတဲ့ပုံထပ်ရတာပေါ့…။
သဂျီးရေ တီးချင်တယ်ဗျို့ .. စိတ်ထဲကြည့်လို့မရတဲ့သူအမှတ်နဲ့ကို အားရပါးရတီးချင်တယ်
ပါးတဖက်ချမှ ၁၀၀၀ ပဲပေးရမယ့်ဟာ
ကြည့်မရတဲ့သူကို ဒဲ့ သွားရိုက်ပါလား..
စိုးတယ် စိုးမိတယ် …စိုးထိတ်မိတော့တယ်…
သူ ဘဲ ဗိုလ်စွဲမှာ သေချာတယ်
သူ က ဗိုက်ကြီးသလောက် ပြင်းတာကလား
သဂျီး သူ့ ကို လှမ်းခေါ်လိုက်ပါ
ပုံ သုံးက ရဲမေနောက်ကို ကိုရင်လည်း ခမောက်လေး
၀တ်ပြီး ဒရမ်လိုက်တီးချင်ပ…။ ဒီမိုသဂျီးနော်..
ဈေးသည် ၁ ရောင်းနေပုံလေးက အားပေးချင်စရာလေးနော့…
၂၇၀မမ အထိ ဆွဲလို့ ရနေမှတော့ သဂျီးရာ …
မျက်ခွက်ကြီးသက်သက် ရိုက်ခဲ့ပါတော့လား …
ဈေးသည်အပါအ၀င် ပါဖော်မာတွေမှာ …သူတို့ သီးသန့်ဖြစ်တည်မှုအတွက်
အိပ္ပစပရက်ရှင် တမျိုးမဟုတ်တမျိုး ကိုယ်ပိုင်သင်္ကေတ အနေနဲ့ ရှိတတ်တယ်ဗျ…
ရပ်ကွက်ထဲက ပဲပြုတ်သည်၂ယောက်တောင် သံရှည်ဆွဲတာ မတူမှတော့
အများကြီးပိုပြီ ပေါ့ဗျာ ..အဲ့ဒါကို ရှာနိုင်ရင် မိုက်ပြီပေါ့ဗျာ..
ကပ္ပချာရင်း သည်မုဒ် ဖြစ်ပြီပေါ့ ….
မှုတ်နေသူ ၁ပုံကတော့ အတော်လေး မဆိုးပါဂျောင်း …
ဝေးဝေးပြေး များများဆွဲပြီး ဘိုးခေဲးထွက်ရင် ပိုမိုက်မှာ ဖြစ်ပါဂျောင်း…
သူကြီးတို့ “AMERCIA” ပွဲဈေးက ဈေးသည် တွေရဲ့ ရောင်းကုန် တွေက အဆန်းပါဘဲလား။
( Republican တွေ က America ကို အမည်ပြောင်း ဖို့ ကြိုးစားနေပြီကိုး – ;-)
ဒရမ်စက်ဝိုင်း က အတော် စိတ်ဝင်စားစရာ၊ :-)
Republican candidate Mitt Romney’s new mobile app, which embarrassingly misspelled “America.”
the campaign’s newly released iPhone app. The app invites users to photograph themselves with their choice of 14 pro-Romney slogans such as “I’maMom For Mitt,” “Obama Isn’t Working” and “The America We Love,” and then share them on social media.
သူက ဟိုတစ်ခါ ပြည်တော်ပြန် တုန်းက လဲ မသိစေသလို၊ သိစေသလို နဲ့။
ဒီ ဒါ့ပုံ တွေ ထဲ မှာလဲ မတွေ့စေသလို၊တွေ့စေလို သလို နဲ့။
ဒီပုံတွေ ထဲ မှာ ရွာသူကြီး ရှိနေတာ။
Hint – ဟိုတစ်ခါ မောင်ဗိုက် က ဆေးမှင်ကြောင် ထိုးထား တဲ့ လက်တွေ ကို ကြော်ငြာတာ အလကား မဟုတ်ဘူး။ ;-)